Umgaqo-nkqubo weMfihlo - Toolsdecuisine.com
ICANDELO 1 - IINKCUKACHA ZOMNTU
Xa uthengwa kwisitolo sethu, njengengxenye yentengo yokuthenga nokuthengisa kwethu, siqokelela ulwazi olusinika lona, ​​njengegama lakho, idilesi kunye ne-imeyile idilesi.
Xa uphequlula ivenkile yethu, nathi siyifumana ngokuzenzekelayo i-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi yekhompyutheni yakho, esenza sikwazi ukufumana iinkcukacha ezininzi malunga nesiphequluli kunye nenkqubo yokusebenza oyisebenzisayo.
Ukuthengisa nge-imeyile (xa kusebenza): Ngemvume yakho, sinokuthumela i-imeyili malunga nevenkile yethu, iimveliso ezintsha kunye nezinye izibuyekezo.
Ufumana njani imvume yam?
Xa unikezela iinkcukacha zakho zobuqu ukugqiba isivumelwano, khangela ikhadi lakho letyala, i-odolo, zicwangcisele ukunikezelwa okanye kubuya ukuthenga, sicingela ukuba uyavuma zethu ukuqokelela ulwazi lwakho kwaye yintoni we sebenzisa oku kuphela kuphela.
Ukuba sikucela ukuba unikeze ngolwazi lwakho lomntu nakwezinye izizathu, ngeenjongo zokuthengisa ngomzekelo, siza kucela imvume yakho ecacileyo ngqo okanye siya kukunika ithuba lokuphuma.
Ndingayinqumla njani imvume yam?
Ukuba emva ngokusinika imvume yakho, wena utshintshe ingqondo yakho kwaye musa Uyavuma ukuba ukuqhagamshelana nawe, ukuqokelela ulwazi lwakho okanye ndiyityhilele, ukuze usazise ngokuqhagamshelana nathi okanye ngeposi ku outilsdecuisine@gmail.com : Outilsdecuisine.com 22 Rue Neuve, VERNOU ON BRENNE, 37210, France
ICANDELO 3 - UKUQALA
Siyakwazi ukutyhila ulwazi lwakho lomntu ukuba sifunyiwe ngumthetho ukwenza njalo okanye ukuba uyaphula iMigomo neMeko yethu yokuThengiswa nokuSebenza.
Isitolo sethu senziwa kwi-Shopify Inc. Basinika isicwangciso se-intanethi ye-e-commerce esivumela ukuba sikuthengise iinkonzo kunye nemveliso.
Idatha yakho igcinwa kwinkqubo yokugcina idatha ye-Shopify kunye nolwazi lwesiseko jikelele, kunye ne-Shopify jikelele. Idata yakho igcinwe kwi-server ekhuselekileyo ekhuselweyo yi-firewall.
Ukuba wenza ukuthenga kwakho ngokusebenzisa isango lokuhlawula ngokuthe ngqo, u-Shopify uya kugcina ulwazi lwakho lwekhadi lesikweletu. Le ngcaciso ibhalwe ngokubhaliweyo ngokuhambelana nomgangatho wokhuseleko lwengcaciso olusungulwe yiCandelo leKhadi lokuTyala (i-PCI-DSS). Ulwazi malunga nokuthengwa kwakho kokuthengwa lugcinwa ixesha elide kunyanzelekile ukugqiba umyalelo wakho. Xa i-oda lakho ligqityiwe, iinkcukacha zokuthengwa kwentengo ziyacinywa.
Zonke izango lokuhlawula ngokuthe ngqo zihambelana ne-PCI-DSS, elawulwa yiBhodi yeMigangatho yeZiKhuseleko zePC, kwaye isiphumo semigudu ehlanganyelwe yiinkampani ezifana neVisa, MasterCard, i-American Express kunye ne-Discover.
Iimfuno ze-PCI-DSS ziqinisekisa ukusetyenziswa ngokukhuselekileyo kwedatha yekhredithi ngokugcina izitishi kunye nababoneleli ngeenkonzo.
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, nceda ubone iMigqaliselo yokuSebenza yokuThengisa apha okanye iPolisi Yobumfihlo apha.
ICANDELO 5 - IINKONZO EZIKHULULEKILEYO KWABANTU ABATATHU
Ngokubanzi, ababoneleli benkampani esithathu esiyisebenzisayo baya kuqokelela, basebenzise kwaye baxelele ulwazi lwakho kwimeko efunekayo ukwenza iinkonzo abasinikezelayo.
Nangona kunjalo, abanye ababoneleli ngeenkonzo zentlalo, njengengeniso yokuhlawula kunye nabanye abaproseshini bokuthenga intlawulo, banemigaqo-nkqubo yabo yobumfihlo malunga nolwazi esimele siwanikezele ngokuthengwa kwakho.
Ngokumalunga nalaba bahlinzeki, sincoma ukuba ufunde imigaqo-nkqubo yabucala ngokucophelela ukuze uqonde ukuba baya kuthatha njani ulwazi lwakho lomntu.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba abanye ababoneleli bangafumaneka okanye babe neendawo ezikhoyo kummandla ohlukileyo kunokuba wena okanye wethu. Ngoko ukuba unqumle ukulandela intengiso efuna iinkonzo zomboneleli wenkampani yesithathu, ulwazi lwakho luya kulawulwa yimithetho yolawulo apho umniki-ndawo ekhoyo okanye abo begunya apho izibonelelo zalo zifumaneka khona.
Umzekelo, ukuba ibekwe Canada kunye lokuvumelana adluliselwa yi yesango intlawulo ibekwe eUnited States, ulwazi iphezu kwakho apho isetyenziselwe ukugqiba intengiselwano ukuze echazwa phantsi kwemithetho EUnited States, kuquka noMthetho wePatrioti.
Emva kokuba ushiye isayithi levenkile okanye uhanjiswe kwiwebhsayithi okanye isicelo sesithathu, awusayi kulawulwa yiMgaqo-nkqubo weNgcaciso okanye iMigqaliselo yokuThengiswa kunye neSivumelwano. Ukusetyenziswa kwewebsite yethu.
Kufuneka ushiye iwebsite yethu ngokuchofoza kwiikhonkco ezithile kwiziko lethu. Asinakuthatha uxanduva lokuziphatha kwangasese kwezi ziza ezinye kwaye sincoma ukuba ufunde imigaqo-nkqubo yabucala ngokucophelela.
Ukukhusela ulwazi lwakho lomntu siqu, sithatha amanyathelo okuphepha kwaye silandele iinkqubo ezifanelekileyo zokuqinisekisa ukuba azilahlekanga, zichithwe kakubi, zifikile, zichazwe, ziguqulwe, zichithwe ngendlela engafanelekanga.
Ukuba usinikezela ngeenkcukacha zekhadi lakho lesikweletu, ziya kubhala ngokusetyenziswa kweprotocol ye-SSL yokhuseleko kwaye igcinwe nge-AES-256 encryption. Nangona kungekho ndlela yokudluliselwa kwi-intanethi okanye ukugcinwa kwekhompyutha kugcinwe kwi-100%, silandela zonke iimfuno ze-PCI-DSS kwaye senza imilinganiselo eyongezelelweyo ngokubanzi eyaziwayo ngoshishino.
KWABAFUNDI BAMANGQINA (AMAKHAYA)
Nolu uluhlu lweekhukhi esisebenzisayo. Sibahlule apha ukuze ube nethuba lokukhetha ukuba ufuna ukuvumela okanye cha.
_session_id, iseshoni yesazisi ekhethekileyo, ivumela u-Shopify ukugcina ulwazi malunga neseshoni yakho (ukuthumela, iphepha lokuhlawula, njl.).
_shopify_visit, akukho datha egcinwe, iqhubeka imizuzu ye-30 ukususela ekutyelelweni kokugqibela. Isetyenziswe yinkqubo yangaphakathi yokulandelela iinkcukacha kwiwebhusayithi yethu ukurekhoda inani lokutyelela.
_shopify_uniq, akukho datha egcinwe, iphela phakathi kobusuku (kuxhomekeke kwindawo yomwendwendwe) ngosuku olulandelayo. Ibala inani lokutyelela kwivenkile ngomthengi omnye.
inqwelo, i-identifier ekhethekileyo, iqhubeka kwiiveki ze-2, igcina ulwazi malunga neenqwelo zakho zokuthenga.
_secure_session_id, iseshoni ekhethekileyo yeseshoni
i-storefront_digest, isihlomelo esiyingqayizivele, esingachazwanga ukuba ivenkile inegama lephasiwedi, isetyenziswe ukufumanisa ukuba ngaba isivakashi sangoku sifikelele.
ICANDELO 7 - IMINYAKA YOKWENZA
Ngokusebenzisa le sayithi, umele ukuba ubuncinane ubuninzi beninzi kwilizwe lakho okanye kwiphondo yokuhlala, kwaye usinike imvume yakho ukuvumela nayiphi na into encinci ukuba isebenzise le ngcaciso. website.
ICANDELO 8 - UTSHINTSHA KWENQUBOMGOMO YOKUPHILA
Sinelungelo ukuyitshintsha le nkqubo Privacy nangaliphi na ixesha, ngoko nceda nceda ujonge rhoqo. Utshintsho kunye nokucaciswa kuya kusebenza ngokukhawuleza ekuposeni kwiwebhusayithi. Ukuba senza utshintsho okubhalwe kulo mgaqo-nkqubo, siza kukwazisa apha ukuba sele zihlaziyiwe, ngoko uyazi ukuba inkcazelo esiziqokelelayo, indlela asebenzisa ngayo, kwaye ndikutyhile oko phantsi kweziphi iimeko, s ' kuyimfuneko yokwenza.
Ukuba isitolo sethu sithengwa okanye ngokuhlanganisana nenye inkampani, ulwazi lwakho lunokudluliselwa kubanikazi abatsha ukuze sikwazi ukuqhubeka nokuthengisa iimveliso.
Ukuba ufuna: ufikelelo, ezichanekileyo, izilungiso okanye ucime nayiphi na inkcazelo yobuqu esinalo ngawe, ukufaka isikhalazo, okanye ukuba ufuna ingcaciso engaphezulu, nceda qhagamshelana imigangatho yethu yabucala arhente outilsdecuisine @ gmail. com okanye ngeposi kwi-Outilsdecuisine.com
[Re: Igosa leMigangatho yeMigangatho]
[22 Rue Neuve, UVERNOU SUR BRENNE, F, 37210, eFransi]